Laga yaabaa 14, 2018 admin
xarunta qorshayaasha magaalada New York blockchain
Sidaana waxa Isniintii lagu jiro toddobaadka blockchain ee New York, City Economic Development Corporation New York (NYCEDC) waxaa bilaabay dhowr dadaallada ay ku riday magaalada on map sida xarun technology blockchain. Horeyn iyaga ka mid ah waa qorshe si uu u furo a “Blockchain Center” in labada kor wacyiga dadweynaha ee technology iyo fududeeyo wada hadalka dhex daneeyayaasha warshadaha.
NYCEDC ayaa sidoo kale ku dhawaaqay tartan, la filayaa inuu bilowdo dabayaaqada 2018, loogu tala galay in ay curiyaan afkaar ku saabsan hagaajinta adeegyada dawladda hoose la casriga blockchain.
Samourai iyo goTenna bilaabay Seeraar jeebka shaqeeya oo aan internet-ka
Tan iyo xiriir internet oo aan had iyo jeer laga heli karaa, lagu kalsoonaan karo ama gaarka loo leeyahay, users cryptocurrency u baahan tahay habab kale oo ay ku xidhmaan shabakadda. Sidaas xawaaladaha ku salaysan York New goTenna, asaasay 2012 by walaalaha reer Brazil Daniela iyo Jorge Perdomo, waa shuraako la Salada Samourai in aan bilowno app ah Android xagaagan u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u soo diri lacagta Seeraar oo aan xiriir internet ah.
“Waxaad u baahan tahay si ay u awoodaan in ay qaataan aad Seeraar xataa meelaha musiibooyinka,” Injineer goTenna Richard Meyers ayaa sheegay in, xiganaya walaalaha Perdomo’ shaqada ugu danbeeyay ee Puerto Rico, meesha qalabka goTenna caawisay dadka usoo celiyaan ka dib markii Hurricane Maria. “Inta aad leedahay hab u haysta in aad telefoon, aad noqon kartaa ilaa iyo meshed iyo xidhiidhka.”
“Waxay bixisaa kale ah in ka badan yahay faafreeb u adkaysta,” Meyers ayaa sheegay in.
cashuurqaade Florida waa hay'adda ugu horeysay US Gov inay aqbalaan Seeraar
A cashuurqaade gobolka Florida ayaa iskaashi la Seeraar BitPay bixinta si ay u aqbalaan processor cryptocurrency kala duwan ee adeegyada.
County Seminole ururinta canshuurta Joel Greenberg ku yiri hadal uu Isniintii in xafiiskiisu uu qaadan doonaa Seeraar lacagta la xidhiidha laysanka darawalka iyo kaarka aqoonsiga, tags gaari oo horyaal iyo canshuurta hantida.
Greenberg ku sheegay war ka:
“Ujeedada aan muddada xafiiska waa in our waayo-aragnimo macaamiisha dhakhso, xariifnimo iyo ku ool ah, iyo in ay adeegyada dawladda ka qarnigii 18-keeno qarniga 21aad iyo habka ka mid ah waa dheer ee cryptocurrency in fursadaha lacag bixinta our… xafiiska Tax County Seminole ku ururinta ee, waxaan ku hawlan our hay'ad dawladeed ugu horeeyay inay aqbalaan Seeraar… by taas oo u fudud oo aan xuduud lahayn iyaga u,” ayuu hadalkiisa ku daray.
NASDAQ ku shaqeeya sarrifka cryptocurrency si loo bilaabo in June
dx.exchange, kaas oo la dhigay si loo bilaabo bisha soo socota, waxaa is-dhaafsiga crypto ugu horeysay ku shaqeeya by NASDAQ. "Faa'iidada iskaashiga tani waa soohay: magac astaanta ah, ee technology iyo xeerarka,"Ayuu yiri agaasimaha DX Exchange Daniel Skowronski.
Iyada oo faa'iido ugu horeysay ee waa wax is-sharaxaadda, Skowronski sii sharxay in ay ku tiirsan yihiin technology lahaa kaabayaasha NASDAQ ee, sida ay engine ku habboon - isticmaalaa in ka badan 70 is-weydaarsiga oo adduunka ah.
SAP si loo bilaabo mashruuca blockchain sahayda
Jinsiyadaha SAP adag software ayaa waxaa loo kordhiyay ay la blockchain shaqada meel sahaydu.
SAP ayaa doonaya in uu codsan casriga ah si ay u silsilado sahayda beeraha jidkii ay Farm inay initiative Consumer.
Torsten acce, SAP ayaa hogaanka blockchain yiri “technology xooggan u ogolaanaya shirkadaha si loo raad raaco asalka ah ee alaabta cuntada, galaan codsiyada iyo qurbaanno, iyo sugee iyo fuliyaan xawaalad.”
Post Previous:Crypto dhalinyarada